अलराउन्डरको जिम्मेवारी वहन गर्नसक्ने पाँच खेलाडी | Hamro Khelkud
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – अलराउन्डरको हरेक टोलीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । प्रमुख ब्याट्सम्यान र बलर दुवैलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी भएका अलराउन्डरले आवश्यक पर्दा दुवै पक्षमा अग्रणी भूमिका खेल्ने क्षमता समेत राख्दछन् ।
ब्याटिङ र बलिङ दुवै पक्षमा योगदान दिने खेलाडी सकेसम्म कप्तानले टोलीमा धेरै नै हुन् भन्ने चाहन्छन् । तर टोली सन्तुलनमा पनि त्यतिनै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । इंग्ल्यान्डका बेन स्टोक्स वर्तमान समयमा विश्व क्रिकेटका उत्कृष्ट अलराउन्डर मानिन्छन् । पारस खड्का नेपालका सफल अलराउन्डर हुन् ।
पारससँगै सोमपाल कामी र करण केसी नेपाली टोलीका नियमीत अलराउन्डर हुन् । महबुब आलमले अघिल्लो दशक एक सफल अलराउन्डरको छवि बनाएका थिए । कुनै पनि टोलीको भविष्य उमेर समूह र घरेलु प्रतियोगितामा खेलाडीले देखाउने क्षमता र प्रर्दशनले बताउने गर्दछ । पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेटमा युवा अलराउन्डरले ठूलो सम्भावना र आशा दिलाएका छन् ।
ती अलराउन्डरलाई नेपालले राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्छ वा सक्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ । राम्रोसँग तयार पार्दै सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा भने नेपाली क्रिकेट अझ माथि पुग्ने देखिन्छ । नेपाली क्रिकेट टोलीमा अलराउन्डरको रुपमा भविष्य देखिएका पाँच खेलाडीबारे छोटकरीमा जानकारी ।
५. आकाश चन्द
युवा अलराउन्डर आकाश चन्द नेपाली क्रिकेटमा सम्भावना बोकेका एक खेलाडी हुन् । सुदूरपश्चिममा हुर्केका आकाशले तीव्र गतिमा बलिङ गर्नुको साथै तल्लोक्रममा आक्रामक ब्याटिङ गर्ने गर्दछन् । यू१९ का प्रमुख खेलाडी चन्दले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट गतवर्षको प्रधानमन्त्री एकदिवसिय राष्ट्रिय प्रतियोगितामा अलराउन्डर प्रर्दशन गरेका थिए ।
गण्डकी प्रदेशलाई ४ विकेटले हराउँदा चन्दले ३४ बलमा समान २ चौका र छक्का सहित तल्लोक्रममा अविजित २९ रन जोडेका थिए । गत माघमा मनमोहन मेमोरियल एक दिवसिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सेमिफाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबविरुद्ध चन्दले ३ विकेट लिनुको साथै २ चौका र १ छक्का सहित २३ रनमा अविजित रहेका थिए ।
आकाश तल्लोक्रममा ठूला सट खेल्दै राम्रो ब्याटिङ गर्ने गर्दछन् । गतवर्ष नेपाली यु१९ क्रिकेट टोलीले मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) विरुद्ध एक दिवसिय खेल खेलेको थियो । उक्त खेलमा पनि आकशले अलराउन्ड प्रर्दशन गरेका थिए ।
जितका लागि ३ सय ३५ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाली यु१९ टोलीले ९ विकेटको क्षतिमा २ सय ९६ रन बनाउँदै सबैको मन जित्न सफल भएको थियो । उक्त खेलमा चन्दले १ विकेट लिनुको साथै तल्लोक्रममा ३० रनको योगदान दिएका थिए । उक्त खेलमा २६ बलमा १ चौका र २ छक्का प्रहार गरेका थिए ।
दोस्रो संस्करणको पोखरा प्रिमियर लिग (पिपिएल) मा पोखरा पल्टनमा आबद्ध भएपनि डेब्यु गर्ने मौका पाएनन् । एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपिएल) मा काठमाडौं किंस इलाभेनमा आबद्ध छन् । तीव्र गतिसँगै तल्लोक्रममा जिम्मेवारी ब्याटिङ गर्ने चन्दले छोटो समयमै राम्रो सम्भावना देखाएका छन् । तर उमेर समूह र घरेलु क्रिकेटमा अझ उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै क्षमतामा निखारता ल्याउँदै जानभने आवश्यक देखिन्छ ।
४. विशाल विक्रम केसी
यू१६ का कप्तान विशाल विक्रम केसी नेपाली क्रिकेटमा अलराउन्डरको रुपमा राम्रो सम्भावना देखाएका छन् । विशालले आफ्नो कप्तानीमा गत वर्ष एसिसी इस्टर्न रिजन यू१६ को उपाधि दिलाउँदै सर्वाेत्कृष्ट खेलाडी चुनिएका थिए ।
विशालले यू१९ टोलीबाट समेत खेलिसकेका छन् । शीर्षक्रम र मध्यक्रममा ब्याटिङ गर्ने विशालले अफस्पिन बलिङ गर्ने गर्दछन् । विशालको अफस्पिन सामना गर्न विपक्षी ब्याट्सम्यानलाई कठिन हुने गर्दछ । प्रदेश पाँचबाट घरेलु क्रिकेट खेल्ने विशालले एमएम कपमा राम्रो प्रभाव छाडे ।
गतवर्ष भारतको हैदरावादमा भएको यू१९ च्यालेन्जर सिरिजमा विशालले भारत ‘ए’ विरुद्ध १ सय २६ बलमा ११ चौका सहित ७१ रनको महत्वपूर्ण इनिङ खेलेका थिए । विशालले छोटो समयमै नेपाली क्रिकेटमा ठूलो सम्भावना देखाएका छन् । अर्कोतर्फ विशालले आफूलाई तयार पार्ने समय पनि राम्रो छ । अझ मिहिनेत गर्दै आफ्नो प्रर्दशनमा निपूर्णता ल्याउँदै गएको खण्डमा विशालमा ठूलो सम्भावना देखिन्छ ।
३. शेर मल्ल
यू१९ का स्पिनर शेर मल्ल एक प्रतिभाशाली अलराउन्डर हुन् । शेरले स्पिनसँगै तल्लोक्रममा राम्रो ब्याटिङ गर्ने गर्दछन् । शेरले यू१९ र घरेलु लिगमा निरन्तर उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै सिनियर टोलीको ढोका ढक्ढकाई रहेका छन् । शेरले माघमा भएको एमएम कपमा मलेसिया–११ लाई ४९ रनमा अल आउट गर्न १० ओभरमा ३ मेडन सहित ११ रन खर्चेर ५ विकेट लिएका थिए ।
आइसिसी विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत अमेरिकाविरुद्ध अभ्यास खेलमा मुलपानी क्रिकेट मैदानमा नेपाल ‘ए’ बाट ७.२ ओभरमा १ मेडन सहित १३ रन खर्चेर ४ विकेट लिदै जित पक्का गरेका थिए ।
उमेर समूहमा पनि शेरको प्रर्दशन राम्रो छ । शेरले गत जेठमा सम्पन्न एकदिवसीय प्रधानमन्त्री कपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कप्तानी गर्दै अलराउन्डर प्रर्दशन गरेका थिए । दोस्रो संस्करणको पिएम कपमा शेरले ४ खेलमा ११ विकेट लिदै सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीमा तेस्रो स्थानमा रहेका थिए । उक्त प्रतियोगितामा शेरले कर्णाली प्रदेशविरुद्ध ७.२ ओभरमा १ मेडन सहित २१ रन खर्चेर ५ विकेट लिएका थिए ।
शेरले आफूले पाएको मौकामा निरन्तर सदुपयोग गर्दै राम्रो छाप छोडेका छन् । शेर पहिलो पटक चैतमा थाईल्यान्डमा भएको इस्टर्न रिजनको लागि सिनियर टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा परेपनि अन्तिम १४ मा स्थान बनाउन सकेका थिएनन् । गतवर्ष भारतमा यू१९ च्यालेन्जर सिरिजमा पनि शेरले राम्रो प्रर्दशन गरेका थिए । स्पिन बलिङमा थुप्रै अप्सन (भेराइटी) उनीमा पाईन्छ ।
गतवर्ष एमसिसीविरुद्ध नेपाल यू१९ टोलीबाट उनले २ विकेट लिनुको साथै २४ बलमा ३ चौका सहित अविजित २८ रन जोडेका थिए । शेरको उमेर समूह र घरेलु क्रिकेटको प्रर्दशन हेर्दा चाडैंनै अलराउन्डरको रुपमा सिनियर टोलीमा स्थान बनाउने देखिन्छ । त्यसको लागि उनले अझ बढी मिहिनेत गर्न भने आवश्यक देखिन्छ ।
२. पवन सर्राफ
पवन सर्राफ नेपाली क्रिकेटमा ठूलो सम्भावना बोकेका एक युवा अलराउन्डर हुन् । सिनियर टोलीबाट एक वर्ष अघिनै खेलि सकेका पवनले ओपनिङ र तल्लोक्रम दुबैमा ब्याटिङ गर्ने क्षमता राख्छन् । बलिङ स्पिन गर्ने गर्दछन् । उमेर समूहमा उत्कृष्ट प्रर्दशनका साथ पवनले गतवर्ष युएईविरुद्ध ओडिआई र टि२० आईमा डेब्यु गरेका थिए ।
पवनले नेपाली टोलीबाट लिष्ट ‘ए’ र प्रथम श्रेणी खेल पनि खेलि सकेका छन् । तर पवनले टोलीमा नियमित स्थान बनाउन भने सकिरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ नेपाली क्रिकेट टोलीको अस्थिर ब्याटिङले पवनको भूमिका पनि अनिश्चित रहँदै आएको छ । उमेर समूहमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गरेका पवनले फ्रेन्चाइज लिगमा पनि राम्रो प्रर्दशन गर्दै आएका छन् ।
पवन नेपाल पुलिसबाट घरेलु क्रिकेट खेल्ने गर्दछन् । पवन ठूलो सटको क्षमता समेत राख्ने गर्दछन् । पवनको हालसम्मको प्रर्दशन हेर्दा नेपाली क्रिकेटमा अलराउन्डरको रुपमा लामो यात्रा गर्न सक्ने सम्भावना देखाएका छन् । तर त्यसकोे लागि उनले अझ बढी मिहिनेत गर्नुको साथै जिम्मेवारी प्रर्दशन गर्न भने आवश्यक देखिन्छ ।
१. कुशल मल्ल
कुशल मल्ल नेपाली क्रिकेटमा लामो यात्रा गर्ने सम्भावना बोकेका अलराउन्डर हुन् । बायाँ हाते कुशल आक्रामक ब्याटिङ र स्पिन बलिङ गर्ने गर्दछन् । उमेर समूह र घरेलु क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रर्दशनका साथ सिनियर टोलीमा स्थान बनाएका कुशलले गतवर्ष टि२० आईमा जिम्बावेविरुद्ध डेब्यु गरेका थिए ।
डेब्यु खेलमा ब्याटिङमा असफल भएपनि बलिङमा उत्कृष्ट प्रभाव जमाएका थिए । कुशलले माघमा आइसिसी विश्वकप लिग–२ मा ब्याटिङ र बलिङ दुबैमा उच्च प्रर्दशन गरेका थिए । अमेरिकाविरुद्ध ओडिआई डेब्यु खेलमा कुशलले ५१ बलमा ४ चौका र ३ छक्का सहित ५० रन बनाउँदै विश्व कीर्तिमान कायम गरेका थिए ।
आर्मीबाट घरेलु क्रिकेट खेल्ने कुशलको प्रर्दशन उत्कृष्ट छ । ठूला सट अनि टोलीको आवश्यकता अनुसार खेल्ने कुशल विपक्ष्य ब्याट्सम्यानलाई बलिङमा स्पिन बलमा घुमाउन सक्ने क्षमता राख्दछन् । उनको बलिङको सामना गर्न विपक्ष्य ब्याट्सम्यालाई कठिन पर्ने गर्दछ । १६ वर्षिय कुशलको उमेर बढ्दै जादा प्रर्दशनमा अझ निखारता आउने छ ।
कुशल टोलीको आवश्यकता अनुसार जुनसुकै क्रममा ब्याटिङ गर्ने क्षमता राख्ने गर्दछन् । ब्याटिङसँगै उनले बलिङ मार्फत पनि टोलीको जित दिलाउन सक्ने क्षमता राख्दछन् । कुशललाई धेरैले नेपाली क्रिकेट पारसको उत्तरधाकारी समेत भन्ने गर्दछन् । कुशलले लामो यात्रा गर्दै नेपाली क्रिकेट टोलीलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउने आशा गरिएको छ ।
बलिङको भविष्य देखिएका पाँच खेलाडी
ब्याटिङको भविष्य मानिएका पाँच खेलाडी
डेब्युमै अर्धशतक प्रहार गर्ने ३ नेपाली ब्याट्सम्यान